အဆိုပါတွစ်တာရိုက်ထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို: ပြဿနာက INPUT ကိုအတူဖြေရှင်း - တွစ်တာ - 2019
သင့်ရဲ့ Twitter အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့် Restoring
တွစ်တာခုနှစ်တွင်လက်မှတ်ထိုးအသုံးပြုသူ (ဆုံးရှုံးသွားသောရဲ့ login, စကားဝှက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး) ၏အမှားသာရှိပါသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အကောင့်ဟက်ကာများ၏ပျက်ကွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့ပြည့်စုံဖျက်သိမ်းရေးအဘို့အစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းနည်းလမ်းများအားလုံးကို options နဲ့အတားအဆီးစဉ်းစားပါ, သင်တို့နှင့်အတူပါပဲ။
အကြောင်းပြချက် 1: ပျောက်အသုံးပြုသူအမည်
လူသိများသည်နှင့်အမျှ, Twitter ကိုတံခါးဝအသုံးပြုသူအကောင့်တစ်ခု login နဲ့ password ကိုသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်မည်, အလှည့်အတွက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအမည်သို့မဟုတ်အကောင့်သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုမှချည်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီနှင့် password, သင်တန်း, ဘာမျှမကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်။
ရဲ့ login သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူအမည်မေ့လျော့ကြပြီလာသောအခါလျှင်ဒါ, သင်မယ့်အစားသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို / အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် password ပေါင်းစပ်သုံးနိုင်သည်။
အရှင်နိမိတ်လက္ခဏာကို-in ကို, သင်တွစ်တာ home page ကို, ဒါမှမဟုတ်အခြားစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောပုံစံကို အသုံးပြု. ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုထဲသို့ဝင်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်လျှင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်ကစာရေးတစ်ဦးအမှားလုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကိုပြင်ပြီးထပ်လော့ဂ်ကြိုးစားပါ။
အကြောင်းပြချက် 2: အဆိုပါပျောက်ဆုံး e-mail လိပ်စာ
ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဖြေရှင်းချက်အထက်ပါဆင်တူကြောင်းခန့်မှန်းရန်မလွယ်ကူ။ သို့သော်တစ်ဦးတည်းသာပြင်ဆင်ရေးနှင့်အတူ: အစားသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုချည်ထားသောသင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုလိုသောရဲ့ login လယ်ပြင်၌ရှိသောအီးမေးလ်လိပ်စာ၏။
ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူနောက်ထပ်ပြဿနာများ၏အမှု၌စကားဝှက်ပြန်ညှိပုံစံကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ယခင်က Twitter ပေါ်တွင်သင်၏ "uchetki" ကိုချည်ထားသောတူညီစာတိုက်ပုံးပေါ်တွင် account ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကို restore ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်, ငါပေးမည်။
ထိုအခါပထမဦးဆုံးအရာငါတို့သည်အကောင့်ဆုံးဖြတ်ရန်သင်သည် restore ချင်ရာမှဝင်ရောက်ခွင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းကိုအနည်းဆုံးအားသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုပေးဖို့တောင်းနေကြသည်။
ရဲ့သာအသုံးပြုသူအမည်သတိရဆိုပါစို့။ ထိုအခါစာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းပုံစံထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် button ကို click "ရှာရန်".
ထို့ကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုအကောင့်မှချည်ထားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ e-mail လိပ်စာများအတွက်လူသိများသည်။ အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ကသင့်ရဲ့ password ကို reset ဖို့ link တစ်ခုနှင့်အတူစာတစ်စောင်၏ပေးပို့ခြင်းအစပျိုးနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်, စာနယ်ဇင်း "Continue".
အောင်မြင်သောပေးပို့ခြင်းအက္ခရာများ ပတ်သက်. သတင်းစကားနှင့်အတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာတိုက်ပုံးကိုသွားပါ။
ထိုအခါငါတို့သည်ဘာသာရပ်နှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျကိုရှာတွေ့ "စကားဝှက်ပြန်ညှိသည်တောင်းဆိုမှုကို" တွစ်တာကနေ။ ဒါဟာကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုခုပါပဲ။
အဆိုပါ အကယ်. "အဝင်" ထိုစာ၏အမျိုးအစားသို့ကျဆင်းဖွယ်ရှိမဟုတ်ခဲ့ "ပမ်" သို့မဟုတ်အခြား partition ကိုစာတိုက်ပုံး။
သတင်းစကားများ၏ content ကိုတိုက်ရိုက်သွားပါ။ ကျနော်တို့လိုအပ်သမျှ - ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Password ကိုပြောင်းပေးပါ".
ယခုငါတို့သာသင့်ရဲ့ Twitter ကို-အကောင့်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်စကားဝှက်အသစ်ဖန်တီးရန်ရှိသည်။
ကျနော်တို့သင့်လျော်သောလယ်ကွင်းထဲမှာကို double-ရိုက်ထည့်ပါနှင့် button ကို click တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲရှုပ်ထွေးပေါင်းစပ်အတူတက်လာ "Send".
အရာအားလုံး! ကျနော်တို့ "uchetki" ပွနျလညျထူထောငျ access, စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ ချက်ချင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလုပ်စတင်နိုင်စေရန်, link ကို click နှိပ်ပြီး "တွစ်တာကိုသွားပါ".
အကြောင်းပြချက် 3: ချိတ်ဆက်ထားသောဖုန်းနံပါတ်မရှိ access ကို
သင့်အကောင့်အထက်ညွှန်ကြားချက်အောက်ပါဖြင့်သင့်အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပြန်လည်, မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်နှင့်ဆက်စပ်သို့မဟုတ် (device ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအခါ, ဥပမာ) က irretrievably ပျောက်ခဲ့မခံခဲ့ရပါ။
ထို့နောက် "uchetki" ၌ရဲ့ login ပြီးနောက်မိုဘိုင်းနံပါတ်ခညျြနှောငျသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်သင့်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုနောက်ခလုတ်ကိုကြှနျတျောတို့၏ကိုယ်ပွားကို click "Tweet"ထိုအ drop-down menu ကထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Preferences ကိုနှင့်လုံခြုံရေး".
ထို့နောက် Account Settings ကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်အဆိုပါ tab ကိုသွားပါ "တယ်လီဖုန်း"။ အကောင့်မဆိုအရေအတွက်အားချည်ထားမဟုတ်လျှင်ဤတွင်, က add သတိပေးခံရလိမ့်မည်။
ဒီ drop-down list ကိုလုပ်ဖို့, ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုရှေးခယျြနှင့်တိုက်ရိုက်သင် "uchetki" ကိုလင့်ထားသောရန်ဆန္ဒရှိသောမိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေး။
ကိုယ့်ငါတို့သည်အသင့်လျော်သောလယ်ပြင်၌ရှိအတည်ပြုကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါနဲ့ click နှိပ် "သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ပါ".
မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အနံပါတ်များကိုပေါင်းစပ်နဲ့ SMS ကို အကယ်. ရရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်, သင်တို့ကိုပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုအစပျိုးနိုင်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ရိုးရိုး link ကိုသွားပါ "သစ်ကိုအတည်ပြုကုဒ်တောင်းဆိုခြင်း.
ထိုကဲ့သို့သောထိန်းသိမ်းရေး၏ရလဒ်အဖြစ်ကမ္ပည်းတွေ့နိုင်ပါသည် "သင်၏ဖုန်းကို activated ဖြစ်ပါတယ်".
အကြောင်းပြချက် 4: "Input ကိုပိတ်လိုက်" ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကို
သင်မိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုကို Twitter မှ login ကြိုးစားသည့်အခါတခါတရံတွင် error message ကိုရနိုငျသညျ, အရာများ၏ content အတော်လေး Uncomplicated ဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာလုံးဝသိကောင်းစရာများမဟုတ်ပါဘူး - "ဝင်ပေါက်ပိတ်ပါသည်!"
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဖြေရှင်းချက်တတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် - သင်ရုံအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်နာရီ activation ပြီးနောက်အလိုအလြောကျပိတ်ထားသောအကောင့်ယာယီပိတ်ဆို့၏အကျိုးဆက်, - ထိုကဲ့သို့သောအမှားဆိုတဲ့အချက်ကို။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, developer များပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင့်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုမှုများကိုစေလွှတ်တော်မကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ ဒီအကောင့်ကိုသော့ခတ်ကာလတစ်ခုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက် 5: အဆိုပါအကောင့်တိုက်ခိုက်ခံရခဲ့ကြရပါမည်
သင့်ရဲ့ Twitter အကောင့် hacked ထားပြီးနှင့်တိုက်ခိုက်သူများကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပြချက်လည်းမရှိလြှငျ, ပထမဦးဆုံးအရာ, သင်တန်း, တစ်ဦးစကားဝှက်ပြန်ညှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့ကြပါဘူး။
နောက်ထပ်ခွင့်ပြုချက်၏မဖြစ်နိုင်၏ဖြစ်ရပ်မှာသာမှန်ကန်တဲ့ option ကို - ထောက်ခံမှုဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, Twitter အကူအညီစင်တာစာမျက်နှာတောင်းဆိုချက်အရဖန်တီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုရှာဖွေ «အကောင့်»link ကိုကျနော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါဘယ်မှာ "Hack အကောင့်».
ထို့နောက် "ခိုးယူ" သင့်ရဲ့အကောင့်ကို၏အမည်ကိုသတ်မှတ်နှင့် button ကို click "ရှာရန်".
အခုတော့သင့်လျော်သော form မှာ, (စကားမစပ်, optional ကိုတည်းဟူသော) ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အမှန်တကယ် e-mail လိပ်စာသတ်မှတ်နှင့်လက်ရှိပြဿနာကိုဖော်ပြရန်။
ကျနော်တို့နေတဲ့စက်ရုပ်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုရန် - checkboxes ကို reCAPTCHA ကို click - နှင့် button ကို click "Send".
ထိုနောက်မှသာအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ Twitter ကို၎င်း၏အဲဒါကပိုင်ရှင်ဖို့ Hack အကောင့်ပြန်၏ပြဿနာများကိုအလျင်အမြန်ဖြေရှင်းနိုင်သတိပြုသင့်ပါတယ်, နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအတွက်ပြဿနာများကိုပေါ်ထွန်းသင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ခိုးယူအကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့် restore ပြန်, သူတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေချာစေရန်ယူသင့်ပါတယ်။ ထိုနေသောခေါင်းစဉ်:
အဆိုပါတွစ်တာအကောင့်မှမဆိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည် Third-party applications များအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီတွစ်တာအကောင့်ဝင်ဝနှင့်အတူအဓိကပြဿနာ။ အားလုံးကထဲကအလွန်ရှားပါးနေသောဝန်ဆောင်မှု၏ချွတ်ယွင်းဖို့ပိုပြီးဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တွစ်တာဖို့ခွင့်ပြုချက်အကောင်အထည်ဖော်နေချိန်မှာသင်ဆဲအလားတူပြဿနာကြုံခဲ့ရပါတယ်လျှင်, သင်ကျိန်းသေထောက်ခံမှုအရင်းအမြစ်ကိုဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။